Okhilimu abazishuka, okufanele ukwazi | Amadoda aSitayela
Okhilimu abazishuka, okudingeka ukwazi
Ihlobo liyancipha. Saqala ukucabanga "ngokusebenza kwebikini". Sifuna ukubukeka sizacile, sibe mnyama, ekugcineni sibe sebuhle ngokwengeziwe. Kepha kunjalo, Manje ngithola kanjani isikhumba sami ukuze ngithole ithoni ehloniphekile? Kunezinketho eziningi. Ungaya ezinsukwini ezimbalwa uye eCaribbean, ulungise umbala otholwa ubuso uma ushibilika eqhweni noma ukhetha izindlela "zokufakelwa". Phakathi kwalezi kunezinto ezimbili ezivelele: imisebe ye-uva kanye ne imikhiqizo yokushuka. Lezi zokugcina zisetshenziswa kakhulu, ikakhulukazi ngentengo yazo.
Kunezinhlobo ezimbili kuphela zemikhiqizo emakethe, ama-wipe kanye nama-moisturizers. Bangu ubuningi bemibono nemibono ngemiphumela yako. Kuthiwani uma beshiya umkhondo, uma bethambisa, uma bengashiyi imiphumela efanayo ...
Zingasetshenziswa, kepha kufanele ucabangele ezinye izinto ngaphambi kokungena ebhizinisini. Ukwenza lokhu, ngenxa yokusetshenziswa okukhulu, sizogxila kunqubo ezolandelwa ebusweni.
Ukufeza umphumela ofanayo futhi obonakala ungokoqobo, kufanele uhlanze isikhumba kahle. Ngenxa yalokhu, i-gel exfoliating kufanele isetshenziswe kepha ngokunembile, isikhumba kufanele siphelele. Uma sesiqede lesi sinyathelo, okungelula ukusifinyelela, kufanele thambisa isikhumba ngokulinganayo.
Ubuso bonke kufanele bufakwe amanzi ngendlela efanayo, uma singayifinyeleli (okungahle kwenzeke) lapho siqhubeka nokusebenzisa isikhumba sokuzisusa ngeke sibe nomphumela omuhle.
Uma sikwazile ukudlula ngempumelelo kulezi zinyathelo ezimbili ezedlule, kuyisinyathelo sokugcina nesokugcina, futhi esiyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, gcoba ukhilimu noma usule. Umkhiqizo kufanele usatshalaliswe ngokulinganayo ebusweni bonke, unake ngokukhethekile izindawo eziyinkimbinkimbi kakhulu, imilenze yomlomo, impumulo, amehlo, izindlebe ... Okuthile okubucayi kakhulu futhi okungadala umonakalo wangempela ebusweni bethu (noma endaweni sifuna ukushuka). Ngoba kufanele ugcine engqondweni ukuthi lokhu akusikho ukwakheka, lokho imiphumela engadingeki ayinakususwa kalula
Uma unesifiso sokushuka manje, noma ngesikhathi lapho ungeke ukwenze ngokwemvelo, inketho enhle kunazo zonke ukuthi zibeke ezandleni zobuhle bakho. Bangabachwepheshe abazinikele kukho futhi bakholelwa kimi ukuthi ngeke ube owokuqala ukuya kohlelo oluthile lokuzishuka.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » Okhilimu abazishuka, okudingeka ukwazi
okuluhlaza okwesibhakabhaka no-orange kusho
banenkinga ethile…. Uma uzishuka ubuso nentamo futhi kubukeka kukuhle kuwe, ubopha okuningi, futhi uma ubopha okuningi, lapho umgcini wezinhlamvu okukhulunywa ngaye ekukhumula futhi akhumule ihembe lakho, ubona ukuthi unobuso obunsundu nomhlophe isifuba, futhi lokho kuyesabeka ... 😉
Amahlaya eceleni, sengizamile okuningi futhi awekho awemvelo ngokuphelele, ngaphezu kwalokho, angcolisa isikhumba (avale izimbotshana)
Konje! ukuthi yini imiphumela engeke igwenywe… Ngabona ukhilimu olwa nokuzishuka phesheya esikhathini esithile esedlule, ukubuyisa ithoni yokuqala. Angizange ngiyizame futhi angazi ukuthi bengizokwenza kanjani, kepha kusasebenza kumuntu!
Hector, nginemibuzo emibili. Eyokuqala ukuthi uma okhilimu abazicwilisa besebenza njengama-moisturizers kanti okunye, kuthiwani ngentshebe? Ingabe kufanele uphuce ngaphambi kwesikhathi? Ngicabanga kanjalo ngoba uma ungakwazi ukwenza umdwebo wenziwe ...
okuluhlaza okwesibhakabhaka no-olintshi, iqiniso ukuthi bengingazi ngobukhona bokhilimu obuzokhansela umphumela wokushuka. Ngizozama ukuthola kahle ukuthi kuyini nokuthi kusebenza kanjani.
Fernando, kukhona okhilimu abazisusayo (hhayi ama-wipe adumile) nawo athambisa amafutha. INivea, L'Oreal neminye imikhiqizo edumile ayinakho ukuqhubeka, yebo, ungalindeli imiphumela emihle. Ngokusobala uma unesibindi sokuzishuka, kufanele uphuce. Njengoba usho kahle, izinwele zizohlanganisa ingxenye yesikhumba futhi ngeke uzuze umphumela ofanayo.
bheka, umkhiqizo engikutshele ngawo yilokhu:
Inemibala emibili "yokuthambisa" isikhumba, angikaze ngiyizame, kepha okufanayo ngenhlekelele ngomuntu ozisusayo kungasiza! Noma mhlawumbe kubi kakhulu, angazi!
Yimuphi ukhilimu wokuzisusa ongangincoma wona? Ingabe iyasebenza ngempela, noma ingabe ishiya lowo mbala wewolintshi wokufakelwa?
UMiguel, njengoba ngishilo kokuthunyelwe, angikucebisi, ngaphandle kokuthi uzibeka ezandleni zobuhle bakho. Ngosizo lwabo, ungafinyelela ithoni ehloniphekile. Uma unesifiso esikhulu sokushuka, ngikweluleka ukuthi usebenzise imisebe yamagilebhisi, uzonqoba, ungikholwe.
Ngiyaxolisa ukungavumelani ngokuphelele nawe. Ngisebenzise okhilimu bokuzicwilisa iminyaka eminingi (ebusika nginebala elimnyama elibulalayo, elingathandeki ukuwabona) futhi inqobo nje uma beneleveli, efana ne-biotherm homme noma i-nivea, ungathola umphumela ongaphezu kokwanele.
Khumbula ukuthi imikhiqizo eshibhile ivame ukudala imiphumela emibi kakhulu, njengesikhumba se-orange nokushuka okungalingani. Kungcono ukusebenzisa imali ethe xaxa ukuthola imiphumela engcono.
Ngivumelana ngokuphelele nodaba lwentshebe. Kufanele ugundwe kahle ukuze ukwazi ukufaka ukhilimu nokuthi ubuso buhlanzekile, kodwa-ke ukulandelana engingakutusa ukuthi: ukuhlanza insipho futhi ngemuva nje kokuthambisa, ake kudlule imizuzu embalwa ukuze isikhumba simunce umswakama kahle bese usebenzisa umsiki wesikhumba.
Ngiyethemba ngibe wusizo !!
Izicathulo ezibiza kakhulu emhlabeni, nguLouis Vuitton
Uzoya ocansini kangaki empilweni yakho?